Barcelona ayaa ku dhawaaqday 22-ciyaartoy
Barcelona ayaa soo saartay kooxdeeda kulanka Sabtida ay la ciyaarayaan Granada, kuwaas oo ay ku jiraan ciyaartoy cusub oo aan ka mid ahayn kooxda koowaad.
Tababare Ronald Koeman ayaa magacaabay 22-ciyaartoy oo kooxdiisa ah kadib markii ay Athletic Bilbao guul layaableh ka gaadhay San Mames.
Ciyaaryahanadda Barcelona waxaa kamid ah ciyaaryahan hore uga tirsanaan jiray kooxda koowaad, Ilaix Moriba, kaasoo markii ugu horeysay uu u yeeray Koeman qeybta labaad wuxuuna badalay Carles Alena oo todobaadkan ka tagay Barcelona kuna biiray Getafe amaah.
Konrad de la Fuente, oo ah laacib kale oo ka tirsan Barcelona B, ayaa markale lagu soo daray safka waxaana uu buuxiyey Clement Lenglet, oo ganaax ku maqan ka dib markii uu qaatay jaalihi shanaad kulankii Bilbao.
Samuel Umtiti ayaa la filayaa inuu ku soo bilaawdo daafaca Ronald Araujo.
Xiddigaha Barcelona ayaa weyn doona xiddigo muhiim ah Gerard Pique, Philippe Coutinho, Sergio Roberto iyo Ansu Fati dhaawac dartiis.
Liiska ciyaartoyda Barcelona ee Granada:
Marc-Andre Ter Stegen, Sergino Dest, Ronald Araujo, Sergio Busquets, Antonio Griezmann, Miralem Pjanic, Martin Braithwaite, Lionel Messi, Ousmane Dembele, Riqui Puig, Neto, Pedri, Francisco Trincao, Jordi Alba, Matheus Fernandez, Frenkie De Jong, Samuel Umtiti, Junior Firpo, Inaki Pena, Ilaix Moriba, Oscar Mingueza, Konent de la Fuente.
Aston Villa – Liverpool ayaa soo bandhigeysa sawirrada
Liverpool ayaa u gudubtay wareega 8da ee FA Cup